Home » Freebies » Codso BILAASHA LACAG LA'AAN AH ee FitFreeze Doomaha
Barafka FitFreeze wuxuu kaa dhigayaa mid buuxa, nadiif ah oo ku qanacsan. Marka lagu daro in uu ku badan yahay borotiinka, FitFreeze waxaa sidoo kale lagu dhejiyaa fibre, waana gluten bilaash ah. Cunto khudradda "Fitfreeze ice cream" 7 oo dhan garaamyo fibre ah oo siddeed jeer ka badan hal koob oo isbinaajka! Kareemkani wuxuu ku yar yahay sonkorta marka loo eego koobkii celceliskaaga ee jimicsiga. FitFreeze waxay ku jirtaa nicalka macmacaanka ah waana daaweyn ay qoyskaaga oo dhan jecel yihiin! Miyaad xiiseyneysaa shaybaarada bilaashka ah ee FitFreeze? Riix halkan si aad u hesho maanta